အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ် မတိုင်မီ လူငယ် ကစားသမား တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို အနေအထားတွေ ရှိနေလဲဆိုတာ ပြောကြား သွားတဲ့ #ဆိုးလ်ရှား - SPORTS MYANMAR
အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ် မတိုင်မီ လူငယ် ကစားသမား တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို အနေအထားတွေ ရှိနေလဲဆိုတာ ပြောကြား သွားတဲ့ #ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား က လူငယ် ကစားသမား တွေ အနေ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ အရည်အသွေး အပေါ် သူတို့ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် မှု အပြည့် အဝ ထားရှိ ခြင်းက ရှေ့ဆက် ဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေ နိုင် လိမ့်မယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် တုန်းက ယူနိုက်တက် တို့ ရော့ခ်ျဒေလ် ကို ပင်နယ်တီ အဆုံး အဖြတ် နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် တုန်းက လူငယ် ကစားသမား လေး တွမ်ဇီဘီ ဟာ အသင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပါဝင် ကစား ခွင့် ရရှိ ထားခဲ့ သလို အသက် 19 နှစိ အရွယ် လူငယ် ကစားသမား လေး ဘရန်ဒန် ဝီလီယံ ကလည်း စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ပွဲစဉ် ကို ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ရလဒ် တွေ ဆက်တိုက် ဆိုးရွား နေခဲ့ သလို အဓိက ကစားသမား တွေလည်း ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကြောင့် ပွဲ ကစား ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံး နေကြ ရ ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှား ကတော့ အသင်း အတွက် အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အရာ တွေ ရှိနေ ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော့် စကား နဲ့ ပြောရရင် လား ? ကျွန်တော့် အတွက် ကတော့ ဒါဟာ ဆက်လက် တိုးတက် နေတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ပါပဲ ။ ဒါဟာ လူငယ် ကစားသမား တွေနဲ့ စုဖွဲ့ ထားတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်သလို အသင်း ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် တွေကို လည်း ဒီမှာ မြင်တွေ့ နေရ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် ဟာ အသင်း ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှာ သူတို့ တွေကို နေ့တိုင်း လိုလို မြင်တွေ့ နေရ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့မှာ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး ၊ အလုပ် လုပ်အား နဲ့ ရည်မှန်းချက် ပိုင်း ဆိုင်ရာ တွေမှာ ဘယ်လို ပြသနာ မျိုးမှ ရှိ မနေ ပါဘူး ။ ကျွန်တော့် တို့ အပေါ် ယုံကြည်မှု ရှိကြ ရဲ့လား ဆိုတာ မေးခွန်း တစ်ခု လား ? ကျွန်တော် တို့ အစုအဖွဲ့ တစ်ခု ရှာနိုင် မလား ? ”
” ခင်ဗျား တို့ အက်စ်တာနာ နဲ့ ရော့ခ်ျဒေလ် ပွဲစဉ် တွေကို ကြည့်ရှု နိုင် ပါတယ် ။ ကောင်လေး တွေက အထင် ကြီးမှု တွေကို ရယူ နိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ အဆုံးသတ် ပိုင်း ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် တွေ ရှိနေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဆက်လက် ကြိုးပမ်း နေဆဲ ပါပဲ ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ် က ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ကို2–0နဲ့ ရှုံးနိမ့် ထား ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီ တစ်ပါတ် အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ပြိုင်ဖက် ကောင်း အာဆင်နယ် အသင်း ကို ဧည့်ခံ ကစား သွား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယ် ။
အဲ့တာကြောင့် လက်ရှိ အချိန် မှာ ယူနိုက်တက် ဟာ အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့် 8 နေရာ မှာ ရပ်တည် နေခဲ့ ရ ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှား ကတော့ ပြင်ပ မှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ ဝေဖန် မှု တွေကို သိပ်ပြီး အာရုံထဲ မထား ပဲ ရှိနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ကတော့ ရှေ့ဆက် ဘာတွေ လုပ်ဆောင် ရ မလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ် ပဲ အာရုံ စိုက်နေ ကြပြီး ဆက်လက် တိုးတက် ကောင်းမွန် လာဖို့ အတွက် ပဲ အားထုတ် ကြိုးပမ်း နေကြ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် အမြဲ တူညီ တဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်နေ မှာပါ ”
” ကျွန်တော် ကစားသမား တစ်ဦး အဖြစ် ရှိနေ ခဲ့စဉ် တုန်းက အသင်း ဟာ အခြေ အနေ ကောင်းမွန် ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာလည်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ သတင်း တွေရဲ့ ခေါင်းကြီး ပိုင်းမှာ အမြဲ ပါဝင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ တွေက တော့ အဲ့ဒီ နေရာ မှာပဲ ဆက်လက် ရှိနေ ချင်ကြ ပါတယ် ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အာဆငျနယျနဲ့ ပှဲစဉျ မတိုငျမီ လူငယျ ကစားသမား တှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဘယျလို အနအေထားတှေ ရှိနလေဲဆိုတာ ပွောကွား သှားတဲ့ #ဆိုးလျရှား
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား က လူငယျ ကစားသမား တှေ အနေ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ အရညျအသှေး အပျေါ သူတို့ ကိုယျတိုငျ ယုံကွညျ မှု အပွညျ့ အဝ ထားရှိ ခွငျးက ရှဆေ့ကျ ဖို့ အကောငျးဆုံး ဖွဈစေ နိုငျ လိမျ့မယျ လို့ ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ တုနျးက ယူနိုကျတကျ တို့ ရော့ချြဒလျေ ကို ပငျနယျတီ အဆုံး အဖွတျ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ တုနျးက လူငယျ ကစားသမား လေး တှမျဇီဘီ ဟာ အသငျး ခေါငျးဆောငျ အဖွဈ ပါဝငျ ကစား ခှငျ့ ရရှိ ထားခဲ့ သလို အသကျ 19 နှစိ အရှယျ လူငယျ ကစားသမား လေး ဘရနျဒနျ ဝီလီယံ ကလညျး စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ပှဲစဉျ ကို ကစား ခဲ့ရ ပါတယျ ။
လကျရှိ အခြိနျ မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ရလဒျ တှေ ဆကျတိုကျ ဆိုးရှား နခေဲ့ သလို အဓိက ကစားသမား တှလေညျး ဒဏျရာ ပွသနာ ကွောငျ့ ပှဲ ကစား ခှငျ့တှေ ဆုံးရှုံး နကွေ ရ ပမေယျ့ ဆိုးလျရှား ကတော့ အသငျး အတှကျ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျတဲ့ အရာ တှေ ရှိနေ ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ကြှနျတေျာ့ စကား နဲ့ ပွောရရငျ လား ? ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ကတော့ ဒါဟာ ဆကျလကျ တိုးတကျ နတေဲ့ အသငျး တဈသငျး ပါပဲ ။ ဒါဟာ လူငယျ ကစားသမား တှနေဲ့ စုဖှဲ့ ထားတဲ့ အသငျး တဈသငျး ဖွဈသလို အသငျး ရဲ့ ယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈ တှကေို လညျး ဒီမှာ မွငျတှေ့ နရေ ပါတယျ ”
” ကြှနျတျော ဟာ အသငျး ရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေး ကှငျးမှာ သူတို့ တှကေို နတေို့ငျး လိုလို မွငျတှေ့ နရေ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့မှာ ကိုယျရညျ ကိုယျသှေး ၊ အလုပျ လုပျအား နဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ပိုငျး ဆိုငျရာ တှမှော ဘယျလို ပွသနာ မြိုးမှ ရှိ မနေ ပါဘူး ။ ကြှနျတေျာ့ တို့ အပျေါ ယုံကွညျမှု ရှိကွ ရဲ့လား ဆိုတာ မေးခှနျး တဈခု လား ? ကြှနျတျော တို့ အစုအဖှဲ့ တဈခု ရှာနိုငျ မလား ? ”
” ခငျဗြား တို့ အကျဈတာနာ နဲ့ ရော့ချြဒလျေ ပှဲစဉျ တှကေို ကွညျ့ရှု နိုငျ ပါတယျ ။ ကောငျလေး တှကေ အထငျ ကွီးမှု တှကေို ရယူ နိုငျဖို့ ကွိုးစား နခေဲ့ ကွ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အခြိနျ မှာ အဆုံးသတျ ပိုငျး ဆိုငျရာ လိုအပျခကျြ တှေ ရှိနေ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ဆကျလကျ ကွိုးပမျး နဆေဲ ပါပဲ ” လို့ ဆိုးလျရှား က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပါတျ က ဝကျဈဟမျး အသငျး ကို2–0နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ထား ခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီ တဈပါတျ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ ပွိုငျဖကျ ကောငျး အာဆငျနယျ အသငျး ကို ဧညျ့ခံ ကစား သှား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယျ ။
အဲ့တာကွောငျ့ လကျရှိ အခြိနျ မှာ ယူနိုကျတကျ ဟာ အမှတျပေး ဇယား အဆငျ့ 8 နရော မှာ ရပျတညျ နခေဲ့ ရ ပမေယျ့ ဆိုးလျရှား ကတော့ ပွငျပ မှာ ဖွဈပျေါ နတေဲ့ ဝဖေနျ မှု တှကေို သိပျပွီး အာရုံထဲ မထား ပဲ ရှိနေ ခဲ့ ပါတယျ ။
” ကြှနျတျော တို့ အားလုံး ကတော့ ရှဆေ့ကျ ဘာတှေ လုပျဆောငျ ရ မလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါ ပဲ အာရုံ စိုကျနေ ကွပွီး ဆကျလကျ တိုးတကျ ကောငျးမှနျ လာဖို့ အတှကျ ပဲ အားထုတျ ကွိုးပမျး နကွေ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ အမွဲ တူညီ တဲ့ အရာ တဈခု ဖွဈနေ မှာပါ ”
” ကြှနျတျော ကစားသမား တဈဦး အဖွဈ ရှိနေ ခဲ့စဉျ တုနျးက အသငျး ဟာ အခွေ အနေ ကောငျးမှနျ ခဲ့တဲ့ အခြိနျ မှာလညျး မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ သတငျး တှရေဲ့ ခေါငျးကွီး ပိုငျးမှာ အမွဲ ပါဝငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ တှကေ တော့ အဲ့ဒီ နရော မှာပဲ ဆကျလကျ ရှိနေ ခငျြကွ ပါတယျ ” လို့ ဆိုးလျရှား က အဆုံးသတျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။